Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ နားလည်မှုမြို့တော် Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ: ၇၇ ။ သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းစာတတ်ကြပါစေ
၇၇ ။ သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းစာတတ်ကြပါစေ
ရေးသားသူ = ခိုင်လေး ( ရွှေတောင် )
အလုပ်ကနေ ပြန်လာပြီး facebook ဖွင့်လိုက်ချိန်မှာ ကော်မန့်လေးတစ်ခုကို ဖတ်လိုက်ရတယ် ။ သူများတင်ထားတဲ့ status တစ်ခုအောက်မှာ ရေးထားတဲ့ ကော်မန့်လေးတစ်ခုပါ ။ ဒီကော်မန့်လေးကို ဖတ်မိရာကနေ အတွေးလေးတွေ ခေါင်းထဲကို ၀င်ရောက်လာခဲ့တယ် ။ ရေးထားတဲ့ ကော်မန့်လေးကတော့ * မိဘဆိုတာ ဘာကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေ အမေဟာ အမေ အဖေဟာ အဖေပါပဲ *
တဲ့ ။ ဟုတ်ပါတယ် ။ သားသမီးတွေကို ဆုံးမတဲ့နေရာမှာ သုံးရင်တော့ ဒီစကားဟာ မှန်ကန်သင့်လျော်ပါတယ် ။ ဖြစ်လည်း ဖြစ်သင့်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် မိဘတွေအနေနဲ့ကတော့ ဒီစကားကိုခုတုံးလုပ်အသုံးချသလို မဖြစ်ဖို့ အလွန် အရေးကြီးပါတယ် ။ ကျွန်မ စာကို နားရှုပ်သွားပြီထင်ပါတယ် ။ ဒီလိုပါ ။ ကျွန်မခုပြောပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေအားလုံးက မိဘတွေကိုစော်ကားဖို့ အပြစ်တင်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး ။ သားသမီးတွေအတွက် မိဘတွေ ဆင်ခြင်နေထိုင်သင့်တာလေးတွေကို ပြောပြချင်တာပါ ။
မိဘတွေအနေနဲ့ ငါမိဘပဲ ။ငါဘာတွေလုပ်နေလုပ်နေ ငါ့သားသမီးတွေက ငါကိုရိုသေမှာပါ ။ ချစ်နေမှာပဲဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ထင်ရာစိုင်းနေမိရင်တော့ မိဘဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်မှာ ရှိမနေသင့်ဘူးလို့ ထင်မိပါတယ် ။ သားသမီးတွေကို ၀မ်းဝအောင်ကျွေး ၊ ခါးလှအောင်ဆင်နေယုံနဲ့ မိဘလို့ မမည်နိုင်ပါဘူး ။
သားသမီးတွေရဲ့ အနာဂတ် လှပဖို့ ၊ သူတို့လေးတွေ သိက္ခာရှိရှိ ရပ်တည်နိုင်
ဖို့ ကျွန်မတို့မိဘတွေရဲ့ အရိပ်တွေဟာ အေးမြဖို့ လိုအပ်သလို ၊ စင်ကြယ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ် ။ ဘာလို့ ဒီလိုတွေ ပြောနေရတာလဲဆိုရင် ခုလက်ရှိ ကျွန်မနေထိုင်ရာ မလေးရှားနိုင်ငံမှာဆိုရင် အိမ်ထောင်ရှိခြင်း ၊ မရှိခြင်း ၊ အသက်ကြီးခြင်း မကြီးခြင်း ဆိုတာတွေကို ထည့်တွက်မစဉ်းစားတော့ပဲ မိန်းမဖြစ်ရင်ပြီးရော ၊ ယောက်ျားဖြစ်ရင် ပြီးရောဆိုတဲ့ သူတွေအများကြီးအပြား တွေ့မြင်လာရပါတယ် ။ မလေးရှားရောက်နေသူ အားလုံးကို မဆိုးလိုပါဘူး ။ ကျွန်မပြောခဲ့သလို ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုတာ ရည်ရွယ်ဆိုလိုပါတယ် ။
မြန်မာပြည်မှာ မိသားစုကျန်နေခဲ့ကြတယ် ။ ဒီရောက်တော့ အပျိုကြီး လူပျိုကြီး ပုံစံနဲ့ ကျန်နေခဲ့တဲ့ မိသားစုတွေကို ခတ္တခဏမေ့ထားကြပါတယ် ။ အဆိုးဆုံးကတော့ အမေအရွယ်လောက်ရှိနေတဲ့ အသက်ခပ်ကြီးကြီး အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ့်သားလောက်သာသာ ကောင်လေးတွေနဲ့ စိတ်ပျော်ရွင်ရာကို လိုက်ကာ အတူတူနေထိုင် နေကြတဲ့ မြင်ကွင်းတွေပါပဲ ။ ဒီဖြစ်ရပ်တွေ တကယ်ရှိမရှိဆိုတာ မလေးရှားမှာ လက်ရှိနေထိုင်သူတိုင်း သိနေတဲ့အကြောင်းအရာ အမှန်တရားတစ်ခုပါ ။ ဒီလိုတွဲလို့ တူတူနေလို့ ရှက်ရမှန်းလည်းမသိ ။ ဒါတွေကို ဂုဏ်ယူစွာ ဖော်ထုတ်ကြွားဝါနေတဲ့ သူတွေတောင် ရှိနေပါသေးတယ် ။ ဒီလို စုံတွဲတွေကိုတွေ့တိုင်း ကျွန်မခေါင်းထဲကို အတွေးတစ်ခု အမြဲဝင်ရောက်လာတတ်တယ် ။ အဲဒါဘာလည်း ဆိုတော့ အသက်ကြီးကြီးအမျိုးသမီးတွေဟာ သူတို့တွဲနေတဲ့ ကောင်လေးတွေရဲ့ နေရာမှာ သူတို့ရဲ့ ရင်သွေးငယ် သူတို့သားလေးတွေ ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် မိဘတစ်ယောက်ရဲ့နေရာကနေ သူတို့ ဘယ်လိုနေကြမလဲ ။ ဘယ်လိုတွေ ခံစားနာကျင်ကြမလဲ ။ သူတို့ တွေးမကြည့်ကြဘူးလား ။
ငါ့သားလေးသာ ငါ့လိုအိမ်ထောင်လည်းရှိနေမယ် ။ငါ့လို အသက်ကလည်းကြီးမယ် ။ အရွယ်ကွာဟမှု တွေလည်း ရှိနေမယ့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ ချစ်ကြိုက်ကာ အတူတကွ နေထိုင်နေကြမယ်ဆိုခဲ့ရင် ဘယ်လိုခံစားကြရမလဲ ။ ကံတရားလို့ သတ်မှတ်တွေးပေးနိုင်ပါ့မလား ။ သေချာပါတယ် ။ အနာပေါ် တုတ်ကျသလို နာကြပါလိမ့်မယ် ။ ဒီတော့ သူများသားသမီးကိုလည်း ကိုယ်သားသမီးလို သဘောထားမျိုး ထားပြီး တွေးပေးသင့်ပါတယ် ။ စာနာပေးသင့်ပါတယ် ။ ငယ်သူတွေက ငယ်ရွယ်တဲ့စိတ်နဲ့ ချဉ်းကပ်လာခဲ့ရင်တောင် ကိုယ်အသက်အရွယ် ၊ ကျန်နေခဲ့တဲ့ မိသားစုတွေရဲ့ မျက်နှာကို ထောက်ထားပြီး စိတ်အလိုကို မလိုက်ဘဲ ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ် ။
အမျိုးသမီးက အသက်ကြီးကြီး ၊ အမျိုးသားက အသက်ငယ်ငယ်စုံတွဲတွေကို မလေးရှားမှာ တွေ့တိုင်း ငါသားလေးသာ ဆိုတဲ့ အတွေးက အမြဲရောက်လာတတ်တယ် ။ ငါသားလေးသာဆို ငါရင်ကွဲပြီဆိုတဲ့ အတွေးကလည်း ထပ်ဆင့်ပါလာတတ်ပြန်တယ် ။ နတ်သျှင်ထောင်နဲ့ ဓာတုကလျာ ဆိုတာတွေ ကျွန်မ မသိချင်ဘူး ။ ကျွန်မသိတာ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ် ။ ငါသားလေး သာဆိုရင် ဆိုတဲ့အတွေး ။ တော်ယုံ လေး ငါးနှစ်လောက် ကွာနေတာမျိုးဆိုလည်း မပြောလိုပါဘူး ။ နောက်ဆုံး အသက်ကွာတယ်ပဲ ထားပါအုံး အမျိုးသား အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံးက လွတ်လပ်သူ အပျို လူပျိုဆိုရင်လည်း မပြောလိုပါဘူး ။ ခုဟာတွေက အသက်အရွယ်တွေက အမေနဲ့သားလောက် ။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေလား ဆိုတော့လည်း မဟုတ်ကြပြန်ဘူး ။ အိမ်ထောင်တွေရှိနေရက်နဲ့ ဖောက်ပြန်နေကြတာမျိုးပါ ။
နောက်တစ်ချက် ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတိုင်းဟာ ကိုယ်သားသမီးတွေပေါ်မှာ တိုက်ရိုက် အချိုးကျရိုက်ခတ်တတ်တယ်ဆိုတာကို မိဘဆိုတဲ့ လုသားတိုင်း သတိရှိစေချင်တယ် ။
ဆရာမကြီး လုပ်နေတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး ။ မကြာခဏတွေ့နေရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကိုမတွေ့ချင် မမြင်ချင် မဖြစ်စေချင်တဲ့ စေတနာပါ ။ ငါမိဘ ပဲ ။ ငါလုပ်ချင်တာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး ကျွန်မတို့ မိဘတွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာ လုံးဝ ရှိမနေသင့်ပါဘူး ။ကျွန်မအတွက်ကတော့ ကျွန်မကလေးတွေ စိတ်အားငယ်မှာ စိတ်ပျက်မှာကို သိပ်ဆိုးတယ် ။ သားနဲ့ သမီးဟာ ကျွန်မဘ၀ပါပဲ ။ သူတို့ရှေ့ဆက်ရမယ့် လမ်းတစ်လျှောက်လုံး အမေဆိုတာ သူတို့အတွက် လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ရင်ခွင်တစ်ခု ။ လေးစားချစ်ခင်ရမယ့် လူတစ်ယောက် အဖြစ်ပဲ မြင်စေချင်တယ် ။ ဒီလိုမြင်ဖို့အတွက် အမိန့်တွေ အာဏာတွေသုံးပြီး မြင်တာထက် သူတို့စိတ်ထဲက အလိုအလျောက်ဖြစ်တည်လာတဲ့ လေးစားချစ်ခင်ခြင်းကိုပဲ ကျွန်မလိုချင်တယ် ။ ဒီအတွက် လုပ်ရပ်တိုင်းကိုသိက္ခာရှိရှိပဲ ဖြတ်သန်းခဲ့တယ် ။ မိဘတွေအပေါ် ကျွန်မဆိုးချင်ဆိုးခဲ့မယ် ။ ဒါပေမဲ့ သားနဲ့ သမီးအတွက်တော့ မိခင်ဆိုးတစ်ယောက် ဘယ်တော့မှာ အဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူး ။
ခုရေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာလေးက မလေးရှားရောက် မြန်မာတို့ရဲ့ အခြေအနေ အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုပါ ။ ဒီစာလေးရဲ့ ပေးချင်တဲ့ massage က အိမ်ထောင်ရှိသူတွေ ဖောက်ပြန်ခြင်းကင်းစေချင်တယ် ။ အိမ်ထောင်ကျပြီးသူတိုင်းဟာ သားသမီးရှိသည်ဖြစ်စေ ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ မိခင်စိတ်ရှိနေကြပါပြီ ။ မိခင်စိတ်ရှိနေသူတွေမို့ သားသမီးချင်း စာနာတွေးတတ်စေချင်တယ် ။ ကိုယ်အခွင့်ရေး ကိုယ်ပျော်ရွင်မှု့အတွက် စိတ်ကြိုက်နေခွင့်လုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုသော်လည်း ကိုယ်ရဲ့ ပျော်ရွင်မှု့ဟာ တပါးသူတွေကို အနှောင့်ယှက် မဖြစ်စေဖို့တော့ လိုအပ်ပြန်တယ် ။ လောကမှာ ကိုယ်လုပ်လို့ ကိုယ်တစ်ဦးတည်းခံရတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး ။ မိသားစုဆိုတာ ရှိနေတဲ့ အတွက် ကိုယ်တစ်မိသားစုလုံး ခံစားနာကျင်ကြရပါတယ် ။ ဒါကြောင့် သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းစာ ပေးတတ်စေချင်တယ် ။ စီးပွားရေး အခြေနေအရသာ နိုင်ငံခြားရပ်ခြားမှာ မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကို ပို့ထားကြပေမယ့် မိဘတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ အမြဲတမ်းပူပန် စိတ်မချဖြစ်နေကြရတာပါ ။
ဒီတော့သားသမီးချင်း စာနာပေးကြပါ ။ ဖောက်ပြန်ခြင်းတွေ ကင်းစေနိုင်ပါစေ။ မိဘတိုင်း မိဘတိုင်း သားသမီးတွေအတွက် သိက္ခာရှိစွာ ရပ်တည်ပေးနိုင်ကြပါစေ ။ သားသမီးရှိသူတိုင်း သားသမီးချင်း စာနာတတ်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းရင်း အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ် ။ မည်သူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမှ ထိခိုက်စော်ကားလိုခြင်းအလျဉ်းမရှိစွာ စေတနာကိုသာ အရင်းခံ၍သာ ရေးသားလိုက်ရပါတော့၏ ။
Posted by ခိုင်လေး ( ရွှေတောင် ) at 12:43 AM
shwetaung, Myanmar (Burma)
flsah song (1)
ခိုင်လေး မွေးနေ့ အမှတ်တရ (1)
ကြေငြာတွေကို ဖယ်ရှားပေးမဲ့ Add- on
47.ကျွန်မ နှလုံးသားနန်းတော်ကို သိမ်းပိုက်စိုးမိုးသွားသူ (၀ထ္ထုတို)
ကျွန်မ နှလုံးသားနန်းတော်ကို သိမ်းပိုက်စိုးမိုးသွားသူ (၀ထ္ထုတို) တစ်ညလုံး ဂျူတီဝင်ထားရတာမို့ ကြိမ်းစက်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေက အိပ်ချင်စိတ်တွေဆီက...
ဆယ်ကျော်သက် နဲ့ ဖောက်ပြန်ခြင်း
ဆယ်ကျော်သက် နဲ့ ဖောက်ပြန်ခြင်း ဒီလ 100 % Magazine တွင်ပါဝင်သော ခိုင်လေးရဲ့ ဆယ်ကျော်သက်နှင့် ဖောက်ပြန်ခြင်း ဆောင်းပါလေးပါရှင် ။ ...
ကာမ တဏှာ ရဲ့ ချည်နှောင်ခြင်းမှ ကင်းဝေးပါစေ ( ဆောင်းပါး)
ဂျာနယ်ပါ ခိုင်လေး ဆောင်းပါးလေးပါ ကာမ တဏှာ ရဲ့ ချည်နှောင်ခြင်းမှ ကင်းဝေးပါစေ ( ဆောင်းပါး) ခိုင်လေး ( ရွှေတောင် ) ကာမ တဏှာ ရဲ့ ချည်နေ...
အချစ်ကို ကိုးကွယ်သူလေး နာမည်ပြောင်းပြီနော်
ရွှေမြန်မာ မိသားစုများ အားလုံး မင်္ဂလာပါရှင် ။ ဒီနေ့ ခိုင်လေး နာမည်လေးကို ခိုင်လေး (ရွှေတောင်) လို့ ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတာကို အသိပေးပါရစေရှင်။ အခ...
ခယ်မဆိုတာ လိုက်ပွဲ မဖြစ်ရအောင်
ခယ်မဆိုတာ လိုက်ပွဲ မဖြစ်ရအောင် ခိုင်လေးဒီတစ်ခါပြောချင်တာလေးကေ တာ့ အနေအထိုင်လေးတွေ တတ်စေချင်တာပါရှင် ............ ခဲအိုနဲ့ခယ်မတွေ...
မကြာမကြာ တွေ့နေရတဲ့ စကားစုလေး တစ်ခုကိုဖတ်မိတိုင်း ကျွန်မခေါင်းထဲကို အတွေးစတွေ ၀င်လာတတ်လေ့ရှိပါသည်။ အမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ခြင်း ဆိုတဲ့ ခေါင်...
ခိုင်လေးတို့ ချစ်သူ သက်တမ်း နှစ်နှစ်ပြည့် ပွဲလေးပါရှင် ( တက်ရောက် မုန့်သုံးဆောင်ကြပါနော်)
မောင်ရေ မောင် က ကေ အတွက် မရှိမဖြစ်တဲ့ အသက်ရှူသံလေး တစ်ခုပါပဲရှင်။ ကျွန်မ နှလုံးခုန်သံလေး ရပ်ဆိုင်းသွားရင် ကေ သေဆုံးသွား နိုင်သလိ...
ဘ၀ က ပေးတဲ့ လောကဒဏ်ရေမွှေးနံ့
ဘ၀ က ပေးတဲ့ လောကဒဏ်ရေမွှေးနံ့ မနက်က ကိစ္စတစ်ခုရှိတာနဲ့ ဆိုက်ကယ်လေး စီးလို့ ပြည်ကို သွားခဲ့ပါတယ် ။လမ်းတစ်ဝက်မှာဘဲ ...
ရင်ခုန်ကြည်နူး ပျော်ရွင်ဖွယ် ရွှေမြန်မာ ဥယျာဉ်တွေ့ဆုံပွဲ ပုံရိပ်လေးများ
ဒီနေ့ ခိုင်လေးတို့ ရွှေမြန်မာ ဥယျာဉ် မိသားစုဝင်တွေ နဲ့ တွေ့ဆုံပွဲလေး လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ကြည်ပြာရောင်နှလုံးသား မြန်မာပြည် ပြန်မှာကို နှုတ်...
★★★အချစ်ကို ကိုးကွယ်သူလေး နှင့် စာရေးဆရာမ မြသွေးနီ တို့ရဲ့ အင်တာဗျူး အစီစဉ်★★★
ခိုင်လေး တာဝန်ယူထားတဲ့ အင်တာဗျူး အစီစဉ်လေးကို တင်ဆက်ဖို့ အလှည့်ကြလို့ လာပြန်ပါပြီရှင် ။ ဘယ်သူကို မေးမြန်းရမလည်းလို့ စီစဉ်တော့ ခိုင်လေးလေးစာ...
အီးမေးလ်ကနေဖတ်ချင်ရင် အီးမေးလိပ်စာထည့်ပြီး Submit ကိုနှိပ်ပါ။
သတ္တိရှိခြင်း ကနေ အားမာန်တွေကို မွေးဖွားယူခဲ့သူ
ခိုင်လေး၏ အမှတ်ရစရာ မှတ်တိုင်လေးတွေပါ ။
► Aug 26 (78)
လာရောက် လည်ပတ်ပေးသည့် အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နားလည်မှုမြို့တော်. Awesome Inc. theme. Theme images by Deejpilot. Powered by Blogger.